လူမေးများသည့်မေးခွန်းများ | Pristine Global Finance
ဤနေရာတွင် အများစု မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းနှင့်အဖြေများကို တွေ့နိုင်သည်။
မေး - HP စနစ်နဲ့အိမ်ဝယ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေလိုပါသလဲ။
ဖြေ – လူကြီးမင်း၏ ဝင်ငွေရရှိကြောင်း အထောက်အထားများ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူမည့် အိမ်တန်ဖိုးအား လစဉ်အရင်းနှင့် အတိုးများ ပေးသွင်းရန်အတွက် လုံလောက်မှု့ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
မေး - ဝင်ငွေကတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ သင်္ဘောသားဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းတွေ ပေးရမလဲ။
ဖြေ – သင်္ဘောသားဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ/ အနီးစပ်ဆုံး (1)နှစ်အတွင်း လစာရရှိထားသော အထောက်အထားများ (Bank Statement, Pay Slip) များ တင်ပြရန်နှင့် အခြားလုပ်ငန်း၊ အာမခံများ ပေးအပ်နိုင်ပါက တင်ပြရန်
မေး - HP စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် ဆိုင်စာရင်းတွေကို ဘယ်ကသိနိုင်မလဲ။ လက်ကမ်းစာစောင် ရှိပါသလား။
ဖြေ – မိမိတို့၏ Pristine Global Finance Company ရုံးခန်း (သို့) Pristine Global Finance Website တို့တွင် ကြော်ငြာပေး သွားပါမည်။
မေး - တစ်ချို့အတိုးနှုန်းတွေက Bank တွေထက်များနေတာ တွေ့ရတယ် ၊ ဘာကွာခြားမှု ရှိပါသလဲ။
ဖြေ – လူကြီးမင်းတို့၏ ချေးငွေလိုအပ်ချက်များအား အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ ဘဏ်မှ မပေးနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများအား လူကြီးမင်းတို့မှ Pristine Global Finance Company တွင် ရယူနိုင်ခြင်းနှင့် မြန်ဆန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့အတွက် Pristine Global Finance Company ၏ ချေးငွေအတိုးနှုန်းများမှာ များစွာကွာခြားမှုမရှိပဲ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် ကောက်ခံထားကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
မေး - အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် MD ၏ထောက်ခံချက်မဟုတ်ဘဲ အခြားမည်သူ၏ ထောက်ခံစာပြပေးရန် လိုအပ်သလဲ?
ဖြေ – အစိုးရဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ အကြီးအကဲမှ ဝန်ထမ်းဖြစ်သူမှာ မှန်ကန်ကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးရန်နှင့် ဝန်ထမ်းကဒ် မိတ္တူများတင်ပြရန် လိုပါသည်။
မေး - Employee Loan အတွက် MDမှ လာရောက်ဆွေးနွေးရန် မအားလပ်သော် ချေးငွေ ယူလိုသူများသာ လာရောက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံစာများနှင့် တကွ လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
ဖြေ – Employee Loan လျှောက်ထားရန်အတွက် ချေးငွေယူလိုသည့် သူများမှ ကိုယ်တိုင် လာလျှောက်၍ လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ Pristine Global Finance မှ ၄င်း ကုမ္ပဏီ၏ MDထံသို့ အားလပ်မည့်အချိန်အား Appointment တောင်းခံ၍ သွားရောက် ဆွေးနွေးပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
မေး - မိမိသည် အကယ်၍ အိမ်အား collateral ထားရှိသော် ရာခိုင်နှုန်း မည်မျှဖြင့် ဖြတ်ပါသလဲ။
ဖြေ – လူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းပေါ်တွင်မူတည်၍ ရာဖြတ်၏ တန်ဖိုးပေါ်တွင် Pristine Global Finance ကုမ္ပဏီ၏ Management မှ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မေး - လစဉ်ပေးဆပ်ရမည့် တိုးရင်းပေါင်းကို နှစ်လပေါင်းဆပ်၍ ရပါသလား? (နောက်ကျ၍)
ဖြေ – နောက်ကျ၍ ပေးသွင်းမည် ဆိုပါက နောက်ကျကြေး ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မေး - HP နှင့် Loan မည်သို့ကွာခြားပါသလဲ?
ဖြေ – HP မှာလစဉ်အရင်းနှင့် အတိုးကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရပါမည်။ Loan မှာ လစဉ်အတိုးကိုပေးဆပ်ရမည်။
မေး - အိမ်ဝယ်မည်ဆိုပါက အခြား collateral တင်ပြခြင်းဖြင့် မလုံလောက်လျှင် မိမိ ချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူထားသော အိမ်၏ စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံအား Pristine Global Finance သို့ ချေးငွေ ပြေကြေသည် အထိ အပေါင်ပစ္စည်း အနေဖြင့် ထား၍ ရပါသလား။
ဖြေ – အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသော အိမ်အား Collateral အနေဖြင့် ထား၍ မရပါ။ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် အိမ်ဝယ်ယူလိုပါက ဝင်ငွေရရှိကြောင်း အထောက်အထားအား တင်ပြရန်နှင့် လိုအပ်ပါက Collateral တင်ပြပေးရပါမည်။